राकेश रोशनलाई क्यान्सर, ऋतिकले भने–‘सर्जरी राम्रो भयो’
नायक ऋतिक रोशनका पिता निर्देशक राकेश रोशनलाई क्यान्सर भएको छ । उनलाई क्यान्सर भएको र सर्जरी समेत गरिएको जानकारी ऋतिकले ट्विटरको माध्यमबाट दिएका छन् । ऋतिकले ट्विट गरेसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत ट्विट गरेर राकेशको शिर्घ स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका थिए । ऋतिकले मोदीको ट्विटमा जवाफ दिदै पिताको सर्जरी राम्रो भएको उल्लेख गरेका छन् ।
राकेशको घाटीमा क्यान्सर भएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । राकेशका भाई राजेश रोशनले पनि अहिले स्वास्थ्य स्थिती राम्रो रहेको बताएका छन् । उनले केही दिनमा नै राकेशलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज मिल्ने उल्लेख गरेका छन् । राकेश रोशन चलचित्र ‘कृष ४’को तयारीमा थिए ।
यो चलचित्रको प्रदर्शन मिति सन् २०१९ को डिसेम्बरमा समेत तोकिएको थियो । तर, अब राकेशको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण यो चलचित्रको निर्माण केही समय पछि धकेलिएको छ ।
बलिउडमा पछिल्लो समय कलाकार इरफान खान, नायिका सोनाली बेन्द्र क्यान्सर रोगबाट पीडित बनेका थिए । उनीहरु अहिले उपचारका क्रममा नै छन् ।
नायिका आलिया भट्ट अबको समयमा अहिलेकी नम्बर १ नायिका दीपिका पादुकोणको लागि चुनौती बनिरहेकी छिन् । सन् २०१८ मा दीपिका पादुकोणको ‘पद्मावत’ र आलिया भट्टको ’राजी’ प्रदर्शनमा आयो । ‘पद्मावत’बाट दीपिकाले राम्रै प्रशंसा पाइन् । उता, ‘राजी’बाट आलियाको चर्चा निकै माथि पुग्यो । दीपिका भन्दा आलियाको लोकप्रियता बढी देखियो ।
बलिउडमा नायिका दीपिका पादुकोणको प्रिय निर्देशक बनेका संजयलीला भंसालीको आगामी चलचित्रमा नायिका अलिया भट्टले काम गर्न लागेको खबर चर्चामा छ । संजयले लगातार तीन सफल चलचित्रमा दीपिकासँग काम गरेका थिए । दीपिकालाई लिएर भंसालीले ‘रामलीला’, ‘बाजीराओ मस्तानी’ र ‘पद्मावत’ जस्ता चलचित्र बनाएका थिए ।
शाहरुखका छोरा र श्रीदेवीकी छोरी रोमान्स गर्दै
हाम्रो सिन्धुली बिपी राजमार्ग एक एक लाईक सियर गरु !!! आफ्नु देसको बिकासमा लगौउ !!!!!
नेपाली नागरिकता नभएका १० सेलिब्रेटी
बिराज भट्टः निखिललाई टक्कर, कमब्याकमा ठक्कर
साहरुख भन्छन्–‘म अबरामको कारण फिल्म निर्देशन गर्न चाहन्नँ’
टाट पल्टिन आँटे प्रियंकाका हुनेवाला ससुरा
प्रियंकाको बिहेमा मोदीलाई निम्तो
विपिन र वर्षाको ‘जात्रै जात्रा’को घोषणा
साराले किन छोडिन् आमाको घर ?
पारिश्रमिक घटेको कुरालाई कपिलले गरे अस्विकार
निरुताले छाडेपछि ‘हजार जुनी सम्म’मा संचिता, विकाससँग सुध्रिएको हो सम्बन्ध ?